Greyhound iyo Wolfwalker kuma guuleystaan ​​Oscar-kii ugu horreeyay ee Apple TV + | Waxaan ka socdaa mac
Greyhound iyo Wolfwalker kuma guuleystaan ​​Oscar markii ugu horeysay Apple TV +
Sidii qorshuhu ahaa, daabacaadda ayaa la qabtay xalay Abaalmarinta Akadamiyadda 93aad ee Hollywood, xaflad ay Apple ku dooratay laba taallo oo loogu talagalay filimada Wolfwalkers iyo Greyhound, si kastaba ha noqotee, labada filimba waxaa laga tagay iyagoo faro madhan.
Daabacaaddan filimka guuleystay, oo leh 3 taallo (oo ka mid ah 6 ee loo magacaabay) ayaa ahaa Reer guuraa, Filim laga heli karo Abriil 30 oo ku saabsan Disney + oo ku guuleystay abaalmarinta Jihada ugu fiican, Filimka ugu fiican iyo Atariishada hogaamiyaha ugu fiican.
2 Diiqa xarragoonaya
3 Nasashada guuleystayaasha
Filimka animated Wolkfwalkers Apple TV + ku tartamay qaybta filimka Muuqaalka Ugu Wanaagsan ee Animated leh Marka hore, Dayaxa dhaafsiisan, Shaun idaha y SoulTan dambe ayaa ah guuleyste qaybtaan, filim laga heli karo Disney +.
Diiqa xarragoonaya, oo uu jilay Tom Hanks, wuxuu ku tartamayay qaybta ugu wanaagsan ee Codka ugu fiican Filimada Ninkii, Wararka dunida weyn, Soul y Dhawaqa Birta. Dhawaqa Birta ayaa ahaa Abaalmarinta Abaalmarinta Akadeemiyada qaybtaan iyo in sidoo kale loo magacaabay qeybta Filimka ugu Fiican.
Sidaan faallo ka bixiyay, Reer guuraa Waxay ahayd filimka helay abaalmarinta ugu badan ee 3 Oscar. Booska labaad, waxaan ka helaynaa filimka El Padre, oo ah filim ku guuleystay 2 Oscar (oo lahaa 6 magacaabis): Actorka ugu wanaagsan Anthony Hopkins iyo shaashadda ugu habboon ee la waafajiyay.
Ninkii, sidoo kale 2 Oscar oo ka mid ah 10 magacaabis, waxay ku guuleysatay taallo loogu talagalay Naqshadeynta Wax soosaarka ugu Fiican iyo Filimaanta Cilmiga ugu Fiican. Mank waa filim uu soo saaray David Fincherwaxaa jilaya Gary Oldmand waxaana laga heli karaa Netflix.
Oscar-ka dhexdiisa Filim caalami ah ugufiican ayaa la aaday Danmark filimka Wareeg kale, filim uu jilayo Mads Mikkelsen (ninka xun ee ka yimid filimka 007 Casino Royale iyo halyeeyga taxanaha cajiibka ah Hannibal).
Wixii ku saabsan Wakiilka ku hadla IsbaanishkaWaxaan kaliya la kulannaa Sergio López-Rivera, oo ay weheliyaan Mia Neal iyo Jamika Wilson ay ku guuleysteen Abaalmarinta Akadeemiyadda ee qaybta ugu Fiican ee Qurxinta iyo Timaha ee filimka Hooyada blues, filim ay jilayaan Viola Davis oo laga heli karo Netflix.
Tennet, mid ka mid ah horyaalkii waaweynaa ee sanadkii hore isla markaana hadheeyay aafada, ayaa helay kaliya hal Oscar ah Saamaynta muuqaalka oo ka fiican.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Greyhound iyo Wolfwalker kuma guuleystaan ​​Oscar markii ugu horeysay Apple TV +